" Mpitarika amin’ny fotoanan’ny krizy ary mpamolavola ny hoavy" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
5 oktobra, andro natokana ho an’ny mpampianatra maneran-tany. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana anefa i Madagasikara koa tsapa ho sahirana ireo fikambanana misehatra eo amin’ny tontolon’ny fampianarana hanao hetsika entina hanamarihana izany andro tokony hanana ny lanjany izany eo amin’ny sehatry ny fampianarana.
Ny UNESCO no nametraka ny 5 oktobra ho andro natokana ho an’ny mpampianatra maneran-tany. Ka misy lohateny hatrany hanamarihana izany andro izany. Raha ho an’ny taona 2020 dia « Mpampianatra : mpitarika amin’ny fotoan’ny krizy ary mpamolavola ny hoavy. » no nofantenana hifanentana. Mazava avy hatrany fa natosiky ny ady amin’ny Corona sy ny aretina Covid-19 ny fanentanana.
Raha ny Conamept manokana na Coalition Nationale Malagasy pour l'Education Pour Tous dia valan-dresaka niaraka tamin’ny mpanao gazety no nataony. Tao amin’ny foiben-toeran’ny Conamept teny Ankorahotra no natao ny fandaharana ho fankalazana io andro io.
Notsiahivin’ny mpandrindra nasionalin’ny Conamept, Huguette Rakotoarivony, ny ezaka efa nataon’ity fikambanana ity, izay misehatra manontolo eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana. Isan’ny nataony vao tsy ela izao ny fanentanana tamin’ny ZAP roa samy hafa tao Ankadinandriana sy Alasora momba ny fanomanana ny rehetra mpampianatra, mpianatra, ray aman-dreny ho vonona hiatrika ny fidirana ho amin’ny taom-pianarana vaovao. Nanome fitaovana entina hiatrehana izany ny Conamept mba hahamora ny fanatanterahana ny hetsika fiarovana ka nizara savony sy ny kojakoja samihafa.
Tsiahivina fa isan’ny efa nataon’ny Conamept ny nanentana ny fanjakana amin’ny ezaka fanatsarana ny tontolon’ny mpampianatra ka efa nandefa ny rakitry ny fikarohana natao ahitana ireo fenitra 20 hanatsarana ny tontolon’ny mpampianatra.
Isan’ny nandray anjara fitenenana koa Atoa Bessa, mpampianatra : « Hiditra ny mpianatra tsy ho ela ary efa misy mihitsy aza ireo efa ao anatin’izany fianarana izao amin’izao fotoana izao. Isany ny niaritra ny mafy tokoa ireo mpampianatra nandritra izao krizy ara-pahasalamana izao. Mila ampiana izy ireo satria mifandray amin’ny olona maro ka sao dia ifindran’ny aretina coronavirus ».
Rakotomalala Raymond dia ray amandreny tonga nanatrika izao resaka izao mba hankasitraka ireo mpampianatra tamin’ny soa marobe tamin’ny alalan’ny fanabeazana nomen’izy ireo tsy hita isa nozarain’izy ireo tamin’ireo mpianatra hatramin’izay ka hatramin’izao. Raha fintinina ny nambarany dia ny mpampianatra no namolavola sy nampianatra ka nahatonga ny rehetra ho eo amin’ny toerana misy ny tsirairay ankehitriny. Mila fanohanana manokana izy ireo hoy izy. Mila mahatsapa izany ny mpitondra fanjakana.
Raha ho an’ny Conamept manokana dia ho tontosaina mandritra ity herinandro ity ny fankalazana ny andron’ny mpampianatra eto Madagasikara hoy Huguette Rakotoarivony, mpandrindra nasionaly.
Lahatsoratra ahitana ireo fenitra 20